पुष्प व्यवसायी वातावरणका संरक्षणदूत हुन् – NewsAgro.com
Main News कृषि सम्बाद
June 5, 2017 June 6, 2017 newsagro कुमार कसजु श्रेष्ठ, जलवायु परिवर्तन, पुष्प, पुष्प व्यवसाय, फूल, फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपाल (फ्यान), वातावरण प्रदूषण, विश्व वातावरण दिवस
वातावरण प्रदूषण विश्वव्यापी चिन्ताको विषय हो । बढ्दो वातावरण प्रदूषणका कारण मानवजीवन र समस्त जगत जोखिममा छ । वातावरणीय सन्तुलनमा प्रतिकूल असर परेकै कारण जलवायु परिवर्तनको असरले एकातिर खाद्यन्न उत्पादनमा ह्रास हुँदै आएको भने अर्कातर्फ विभिन्न रोगहरूको संक्रमण बढेको छ । खासगरी शहरी क्षेत्रमा यस्तो जोखिम बढी देखिएको छ । वातावरण संरक्षणमा हरियालीले महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ तर राज्यस्तरबाट शहरी क्षेत्रमा हरियालीको उचित व्यवस्थापन हुनसकेको छैन । शहरी क्षेत्रमा विस्तार हुँदै गएका व्यावसायिक पुष्पखेती तथा नर्सरीहरूले अप्रत्यक्षरूपमा वातावरण संरक्षणमा योगदान पु¥याएका छन् । सरकारले भने वातावरणमैत्री यस्ता नर्सरी शहरी क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न रोक लगाएको छ । प्रस्तुत छ, विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा वातावरण संरक्षणमा पुष्प व्यवसायको योगदानलगायतका विषयमा फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपाल (फ्यान) का अध्यक्ष कुमारकसजु श्रेष्ठसँग लेखनाथ पोखरेलले गरेको कुराकानी :
कुमारकसजु श्रेष्ठ अध्यक्ष, फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपाल (फ्यान)
वातावरण र फूलबीच कस्तो सम्बन्ध हुन्छ ?
वातारणलाई दुई तरिकाले हेर्न सकिन्छ । एउटा इकोसिष्टम, अर्को हरियाली प्रबद्र्धन । हामी सौन्दर्यसहितको हरियाली प्रबद्र्धन गर्छौं । पुष्प व्यवसाय यसैसँग सम्बन्धित छ । सौन्दर्य र हरियालीको संयोजन नै पुष्प व्यवसाय हो । पुष्प व्यवसायीले हासिल गरेको आर्थिक समृद्धि यही तीनवटा कुराको संयोजनबाट भएको हो ।
पुष्प व्यवसाय त व्यवसायमात्रै होइन र ?
यो व्यवसायमा मात्रै सीमित छैन । वातावरण संरक्षणसँग जोडिएको छ । शहरी क्षेत्रमा जनघनत्व बढ्दैछ । शहरमा हरियाली पर्या पर्यावरणमार्फत वातावरण संरक्षण गर्न र ताजा अक्सिजन उत्पादन गरेर वातावरण सन्तुलित राख्न पुष्प व्यवसायको महŒवपूर्ण भूमिका छ । मानिसहरू भीडभाड र अस्तव्यस्त शहरी वातावरणबाट फ्रेस स्थानको खोजीमा हुन्छन् । प्राकृतिक वातावरणको अभावमा मानिसमा विभिन्न किसिमको तनाव उत्पन्न हुन्छ । तनाव घटाउन आफ्नो घर वरिपरी फूल, विरुवा रोप्ने चलन छ ।
वातावरण मन्त्रालयसँग तपाईंहरूको सहकार्य कस्तो छ ?
उत्पादनसँग सम्बन्धित भएकाले पुष्प व्यवसायलाई कृषि मन्त्रालयलअन्तर्गत राखिएको छ । हामीले वातावरणसँग सम्बन्धित काम पनि गरिराखेका छौँ । त्यसैले उत्पादन कृषि मन्त्रालयले हेर्ने र हरियाली प्रबद्र्धनलाई वातावरण मन्त्रालयले हेर्ने व्यवस्था भएमा पुष्प व्यवसाय र वातावरण संरक्षणको काम अझै व्यापक बनाउन सकिन्छ । अहिले महानगरपालिकामा वातावरण विभाग स्थापना भएको छ र हरियाली प्रबद्र्धन गर्दै आएको छ तर योमात्रै पर्याप्त छैन ।
कार्बन उत्सर्जनका नाममा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट नेपालले आर्थिक सहयोग पाउँदै आएको छ, त्यो कहाँ खर्च हुन्छ ?
यो एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न हो । सम्पन्न मुलुकहरूले उत्पादन गरेको प्रदूषण हरियालीमार्फत घटाउन हाम्रो देशको महŒवपूर्ण भूमिका छ । सरकारले शहरमा सकडपेटीमा हरियाली प्रबद्र्धनको काम अघि बढाएको छ । हामी पनि शहरीभत्रै बसेर पुष्प व्यवसायमार्फत हरियाली प्रबद्र्धनको गरिरहेका छौं । यसमा वातावरण मन्त्रालय, पुष्प व्यवसायी र सरोकार निकायबीच सहकार्य हुनसकेमा हरियाली प्रबद्र्धनको काम अझै प्रभावकारी हुनसक्छ । कार्बन उत्सर्जनवापत प्राप्त रकम वातावरण मन्त्रालयले केमा खर्च गर्छ हामीलाई जानकारी छैन । चुरोटमा स्वास्थ कर लगाएर क्यान्सर अस्पताल बनाउने काम भएको छ तर वातावरण शुल्कवापत उठेको रकमको खर्च पारदर्शी छैन । हामीले पनि वातारण शुल्क तिर्दै आएका छौं ।
तपाईंहरू कृषि विकास मन्त्रालयसँग निकट हुनुहुन्छ, वातावरण मन्त्रालयसँग चाहिँ सम्बन्ध कस्तो छ ?
हामीले वातावरण मन्त्रालयसँग अहिलेसम्म सम्पर्कै छैन । हाम्रो सबै काम कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गत हुने भएकाले वातावरण मन्त्रालयसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता नभएरै सम्पर्क हुन नसकेको हो । अहिले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसँग भने वातावरण संरक्षणका लागि हामी समन्वयको पहल गर्नेछौं । अहिले हरियाली प्रबद्र्धनका नाममा गलत तरिकाबाट ‘प्लान्टेसन’ भइरहेको छ । यसको नियन्त्रण र व्यवस्थापन कसले गर्ने ? यसमा पब्लिक, प्राइभेट पार्टरसीप (पीपीपी) मोडलमा काम गर्न सकिन्छ ।
पुष्प व्यवसायको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ?
देशभरि करिब सातसय पुष्प व्यवसायीले काम गरिरहेका छन् । हरेक पुष्प व्यवसायीले उत्पादनका साथै वातावरण संरक्षणको काम पनि गरेका छन् । मेचीको व्यवसायी होस् या महाकालीको, पुष्प व्यवसायमार्फत हरियाली प्रबद्र्धन गरेका छन् । पुष्प व्यवसायीहरू वातावरण संरक्षणका दूत हुन् । यो यथार्थ सबै निकायहरूले मनन गर्नुपर्छ । उद्योग मन्त्रालयले महानगरपालिका, नगरपालिकाभित्र अन्य प्रदूषणजन्य उद्योगजस्तै गरेर नर्सरीसमेत दर्ता हुन दिएको छैन । पुष्प नर्सरी त प्रदूषण रोक्ने व्यवसाय हो । कस्तो उद्योग व्यवसायले वातावरणमा असर गर्छ र कस्तो उद्योगले वातावरण संरक्षण गर्छ भन्नेसमेत सरकारले वर्गीकरण गर्न सकेको छैन । सरकारको यस्तै विभदेपूर्ण नीतिका कारण हाम्रा व्यवसायीहरू नर्सरी दर्ता गाउँपालिकाभित्र र सञ्चालन नगरपालिकाभित्र गर्न बाध्य छन् । वातावरण संरक्षण गर्ने उद्योग व्यवसाय निर्वाधरूपमा महानगर तथा नगरपालिकाभित्र चलाउन दिनुपर्छ ।
पुष्प व्यवसायमा आत्मनिर्भरता कस्तो छ ?
पछिल्लो समय नेपाल पुष्प व्यवसायमा आत्मनिर्भरताको दिशातर्फ अग्रसर हुँदैछ । आजभन्दा १५ वर्षअघि फूल कुल मागको ८० प्रतिशतसम्म आयात हुने गरेको थियो तर अहिले ८० प्रतिशत यही उत्पादन हुन्छ, २० प्रतिशतमात्रै आयात हुने गरेको छ । हाम्रो अभियान नै आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रबद्र्धन र आत्मनिर्भरता हो । यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि पुष्प व्यवसायमा प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिएका छौं । थोरै जमिन, थोरै मिहिनेतले धेरै र गुणस्तरीय उत्पादन गर्ने सोचका साथ सरकारसँग सहकार्य गर्दै अघि बढेका छौं ।
हालसम्म कति क्षेत्रफलमा ग्रीनहाउस स्थापना भएका छन् ?
आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा सुरु भएको योजनाअन्तर्गत पहिलो वर्ष १५ हजार वर्गमिटरमा र ०७२/७३ मा २१ हजार वर्गमिटरमा ग्रीनहाउस जडान भइसकेको छ । यसैगरी ०७३/७४ मा २५ हजार ८ सय वर्गमिटर क्षेत्रफलमा जडान हुँदैछ । आगामी ५ वर्षभित्र झण्डैै २ लाख वर्गमिटर क्षेत्रफल ग्रीन हाउस विस्तार भइसक्नेछ । यी ग्रीनहाउस विश्व बजारमा प्रचलित प्रदुषित ग्यास उत्पादन गर्ने ग्रीनहाउस होइनन्, यहाँ स्थापना भएको नेचुरल भेन्टिलेटेड पोलिहाउस हो र वातावरणमैत्री हुन्छ । यस्तो ग्रीनहाउसमा विषादी प्रयोगविना नै बाह्रै महिना उत्पादन लिन सकिन्छ ।
पुष्प व्यवसायका समस्या र चुनौती के के हुन् ?
शहरी क्षेत्रमा पुष्प व्यवसाय सञ्चालन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या जमिनको अभाव हो । जहाँ जमिन सस्तो छ त्यहाँ सडकको पहुँच छैन । शहरी क्षेत्रमा महँगो भाडामा सीमित समयका लागिमात्रै जमिनको सम्झौता गर्नुपरेको छ । जग्गाधनीहरू पाँचवर्षभन्दा बढीको सम्झौता गर्न चाहँदैनन् । जनशक्तिको पनि त्यतिकै अभाव छ । दक्ष र अदक्ष र अर्धदक्ष सबैखाले जनशक्तिको अभाव छ । वित्तीय पहुँच छैन । सरकारले कृषि ऋणको व्याजमा अनुदान दिने भने पनि लक्षित वर्गले पाउन सकेको छैन । बैंकहरूले यस्तो अनुदानको कृषि ऋण उत्पादनसँग सम्बन्धितलाई नभई कृषिसँग सम्बन्धित उद्योगलाई मात्रै दिने गरेको पाइएको छ । बीमाको पनि समस्या छ ।
विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
अहिलेसम्म वातावरण दिवस औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुँदै आएको छ । परिमाणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन हुनसकेको छैन । वातावरण दिवसमा वृक्षरोपणका लागि भन्दै सम्बन्धित निकायले सित्तैमा पाइने बिरुवाहरू खोज्दै हिँड्ने गरेको पनि पाइएको छ । अहिले राजधानीको वातावरण सास फेर्नलायक छैन । स्वच्छ वातावरण निर्माणमा सबैमा चेतना जगाउनुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारले वातावरण संरक्षण र प्रबद्र्धनका लागि लगानीका साथै चेतनामूलक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
← प्युठानमा धान रोपाइँको चटारो सुरु
देउवा बने ४० औं प्रधानमन्त्री →